Semalt Inopa Pfuma Inobatsira yeData Scraping Tool
Sezvimwewo mazano ekutsvaga webhu , GitHub inowedzera mashoko kubva mawebhu akasiyana-siyana nenzira inokurumidza uye inobudirira. Ichi chishandiso chinonyanya kukanganisa dhiyabhorosi kubva mumifananidzo uye kunoita kuti ruzivo rwako rwekutsvaga runakidze.
Vatungamiri vebhizimisi vanogara vachicherechedza zveruzivo uye vanochida kuti zvigadziriswe zvakanaka, pasina kukanganisa pahutano - darphin exquisage set. GitHub ndiyo chete chigadziro chinounganidza, chinokonzera uye chinoponesa data yako muzvidimbu zvinodiwa. Zvimwe zvekunakidza kwayo zvinokurukurwa pasi apa.
1. GitHub inobatsira kuunganidza yakawanda data
NeGitHub, unogona kuunganidza uye kuronga data kubva pawebhu uye unogona kuikumbira kuDrive yako.Kune nhamba huru yemifananidzo uye mavhidhiyo ane mashoko anobatsira. Newebasa rekutsvaga webhutachi, hazvibviri kubvisa deta kubva pamapepa ePDI, JPG nePNG mafaira. Zvisinei, GitHub inoita kuti zvive nyore kwauri kutora mashoko kubva pamapepa ePFP uye mamwe marudzi emafaira. Muchidimbu, GitHub ichakubatsira kuti unzwisise bhizinesi rezvemabhizimisi zviri nani uye richazarura musuo wemikana mitsva.
2. Tsvaga mashoko akajeka neGitHub:
Zvishandiso zvemashoko ekushandisa zvatinoshandisa hazviwani ruzivo rwakarurama uye rwechokwadi. Kusiyana nemasangano iwayo, GitHub inounganidza dhora zvakarurama uye inoongorora huwandu hwayo. Saka kana iwe uchida kutsvaga ruzivo kubva kumakwikwi ewebsite, unofanira kuedza GitHub. Ichi chishandiso chinogutsikana nemigumisiro yakanakisisa uye haisi kupa zvinyorwa zvinyorwa kuvashandisi vayo.
3. GitHub inoponesa nguva yako:
Kuwedzerwa kwainoitwa nhamba kunoita kuti musiyano uite. NeGitHub, unogona kutsvaga kusvika 20 000 mifananidzo uye zvinyorwa zveShoko mumaminitsi makumi mashanu. Nokudaro, iyi shanduro inochengetedza nguva yako nesimba uye inoshandisa dhigirii nekukurumidza. GitHub inokodzera kutanga uye webmasters uye inovabatsira kuti vaite zvinotungamirira paInternet.
4. Ramba uchikwikwidzana naGitHub:
Kuunganidza simba re data kunokosha mukushandurwa. NeGitHub, unogona kuramba uchikwikwidzana uye unogona kuwana zvinyatsonzwisisiro pamusoro pematengesi emakambani aripo. Iri sangano rinopa ruzivo pamusoro pe e-commerce nzvimbo, makambani eFMCG, nemisika, zvichiita kuti zvive nyore kwauri kuti uone kuti marimi ako akamira kupi. Mutsindo wayo unobatsira kukurudzira uye kuzivisa marashi yako nenzira iri nani.
5. Zvose izvi pane imwe nzvimbo:
NeGitHub, unogona kuwana dhidhiro muzvinhu zvinodiwa zvakagadzirwa. IInternet inogadzira zvidhinariyoni zvinyorwa zvemashoko maminiti ose. Iri shandiso richakubatsira iwe kutsvaga deta kubva kumashizha emagariro evanhu uye zvinyorwa zvemashoko. Iwe unogonawo kutsvaga mabhigiji e-teknolojia uye mawebhusayithi ekutengesa kuti uvandudze nzvimbo yako yekutsvaga. Iwe haufaniri kutarisana ne data isina kusimbiswa kana yakasviba nokuti GitHub inoronga deta yako nenzira yakagadzika uye inogadzika uye inoponesa nguva yakawanda. Ichi chishandiso chakakonzerwa nemabhizimisi, mabhizinesi eIndaneti, makambani uye mahofisi ekufamba.
Runako rweiyi kudhonza dhiyabhorosi basa nderokuti inogadzirisa zvizere uye inokodzera zvido zvako nenzira iri nani. NeGitHub, unogona kutarisa mazwi emazwi emakwikwi ako, kunyora mapeji ako ewebhu uye kubvisa ruzivo kubva kune zvose mukati nekunze hukama hwakanaka. Nhamba huru yekambani inotendesa GitHub uye kushandisa shanduri iyi nguva dzose.